Sweden oo joojisay ku celinta Giriiga (cusub) | Somaliska
Maxkamada Socdaalka ee Magaalada Malmö ayaa amartay in kiisaska 5 qof oo qaxootiya lagu baaro Sweden kuwaas oo ka soo galay dalka Gariiga, Maxkamada ayaa taas sabab uga dhigtay qalalaaso xaga sharciga Socdaalka ee wadanka Gariiga, ayadoo Maxkamadu ay sheegtay in dhibaato bili'aadanimo oo wayn ay haysato dadkaan aysana macquul ahayn in lagu celiyo Gariiga. Laanta Socdaalka Sweden ayaa sheegtay in sharciga qaxootiga Giriiga uu sii halaabay sanadihii ugu dambeeyay ayadoo sidoo kale soo xigatay in Hay'ada UNHCR ay cambaareysay sida gariiga ula dhaqmaan soo galootiga. Sida uu dhigayo heshiiska Dublin, qofka Sweden ka soo gala wadan kale oo Yurub ka mid ah waxaa qasaba in kiiskiisa lagu baaro wadanka uu kow ka soo galay. Go'aankaan ayaa u gogal xaaraya kiisas badan oo dadka Soomaaliyeed ee faraha ku leh wadanka Gariiga. War Cusub: Laanta Socdaalka Sweden ayaa go'aanka maxkamada ka qaadatay racfaan, ayadoo uu ku dooday sharci yaqaanka ugu sareeya hay'ada Mikael Ribbenvik in go;aankaan aysan gaari karin maxkamad magaalo balse laga rabo in uu ka yimaado Maxkamada Sare ee Socdaalka.
Maxkamada Socdaalka ee Magaalada Malmö ayaa amartay in kiisaska 5 qof oo qaxootiya lagu baaro Sweden kuwaas oo ka soo galay dalka Gariiga, Maxkamada ayaa taas sabab uga dhigtay qalalaaso xaga sharciga Socdaalka ee wadanka Gariiga, ayadoo Maxkamadu ay sheegtay in dhibaato bili’aadanimo oo wayn ay haysato dadkaan aysana macquul ahayn in lagu celiyo Gariiga.
Laanta Socdaalka Sweden ayaa sheegtay in sharciga qaxootiga Giriiga uu sii halaabay sanadihii ugu dambeeyay ayadoo sidoo kale soo xigatay in Hay’ada UNHCR ay cambaareysay sida gariiga ula dhaqmaan soo galootiga.
Sida uu dhigayo heshiiska Dublin, qofka Sweden ka soo gala wadan kale oo Yurub ka mid ah waxaa qasaba in kiiskiisa lagu baaro wadanka uu kow ka soo galay.
Go’aankaan ayaa u gogal xaaraya kiisas badan oo dadka Soomaaliyeed ee faraha ku leh wadanka Gariiga.
War Cusub: Laanta Socdaalka Sweden ayaa go’aanka maxkamada ka qaadatay racfaan, ayadoo uu ku dooday sharci yaqaanka ugu sareeya hay’ada Mikael Ribbenvik in go;aankaan aysan gaari karin maxkamad magaalo balse laga rabo in uu ka yimaado Maxkamada Sare ee Socdaalka.